PSG Oo Wadahadalo Kula Jirta Lionel Messi – Garsoore Sports
PSG Oo Wadahadalo…
Lionel Messi ayaa xiriir la sameeyay maamulaha kooxda Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino kaddib markii la xaqiijiyay ka tagistiisa Barcelona.
Messi ayaa haatan ah wakiil xor ah waxaana la filayay inuu heshiis cusub qalinka ugu duugo Barcelona, laakiin sii joogitaanka Camp Nou haatan waa wax aan macquul aheyn. Labada dhinac ayaa gaaray heshiis uu kusii joogayo Blaugrana, laakiin waxaa kahor istaagay inuu saxiixo heshiiska sababo la xiriira “caqabado dhaqaale iyo qaab dhismeed”.
Iyadoo kusii nagaanshaha Barça aysan ahayn ikhtiyaar, Messi ayaa hadda ku qasban inuu helo koox cusub iyadoo xilli ciyaareedka 2021/22 ay maalmo ka harsan yihiin.
Si kastaba, kooxda Paris Saint Germain ayaa haatan lasoo warinayaa inay wadahadalo rasmi ah kula jirto xiddiga reer Arjentiina.
Warbixin lagu daabacay wargeyska Athletic, ayaa lagu sheegay in Messi uu la xiriiray tababaraha kooxda PSG oo ay isku wadanka yihiin ee Mauricio Pochettino..
Tani waxay dhalisay wada-hadallo dheeri ah oo dhex mara labada dhinac waxaana la fahamsan yahay in madaxweynaha PSG Nasser Al-Khelaifi uu hadda hoggaaminayo wadahadalada.
Kooxda PSG ayaase walaac ka qabta inay awoodaan inay bixiyaan mushaharka Messi, maadaama ay durbadiiba lacag badan ku bixiyeen saxiixyadda Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma iyo Achraf Hakimi oo ay dhowaan soo xerogeliyeen, waxayna haystaan xagaa kale oo qarash gareyn xoog leh loogu tala galay sanadka soo socda.
Si kastaba ha ahaatee, PSG ayaa si dhab ah uga fiirsaneysa inay heshiis la gaarto Messi, iyagoo baaraya faa’iidooyinka ganacsi ee ay saxiixiisa ka heli karto. Subaxnimadii Jimcaha, kooxdu waxay gaartay gunaanadka in dhaqaaqitaanku suurtogal yahay.